Posted by မေဓာဝီ at 2:42 PM
ပုရေနိသင် ရော မဲဇာတောင်ခြေ ပါ စီအက်ဖ်မှာ ပြောပြတော့ ရာဟူးက အဖွဲ့တွေကလည်း သဘောကျကြတယ်။ ကျေးဇူးပါ မေဓာဝီ။
9/02/2007 4:59 PM
အမရဲ့စာတွေဖတ်ရတာ ဗဟုသုတ အများကြီးရပါတယ်
ဘယ်မှာရေးရမှန်းမသိလို့ comment မှာရေးလိုက်တာပါ
Ma Maydarwii good day par.
First of all. thanks for sharing your knowledge in you posts.
pls keep it on.
I have some comfusions with this post.
you said "he( the minister) was excuted for doing indecently..."
မိမိသခင် အမြင့်မြို့စားကိုပင် မသင့်သောအမှု ကြံစည်ရမည်လားဟု ဆို၍ ကွပ်မျက်ခြင်း ပြုလေသည်။
then in the next paragraph.. he was re assign as town mayor..
ဘိုးတော်ပဒုံမင်းတရားကြီး မင်းအဖြစ် သို့ ရောက်တော်မူသောအခါတွင်မူ မြို့ဝန်ရာထူးဖြင့်
pls remove my ambiguity.
(myanmar lo type ma lote tat lo)
(also my english is bad) sorry..
ကိုသက်ဦးအတွက် အသုံးဝင်ပြီး အားလုံးလည်း ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ရှင်။
mositone ... ကျမ စီဘောက် မထားတာက စီဘောက်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို လန့်လို့ပဲ ဆိုပါတော့။ ပြောချင်တာတွေရှိရင် ကွန်မန့်ထဲမှာ ရေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။
moe ... ဟုတ်တယ်ရှင့် ... ကျမ ဒီ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကို ပြန်ရိုက်နေရင်း အဲဒီနေရာရောက်တော့ နှစ်ခေါက်လောက် ပြန်ဖတ်ကြည့်မိတယ်။ အချက်အလက်က လွဲနေသလိုမို့ ကျမလည်း သိပ်ဘ၀င်မကျဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုးကားစရာ တခြားစာအုပ်အလွယ်တကူ မရှိတာနဲ့ဘဲ ဒီအတိုင်း တင်လိုက်မိတာပါ။ တခုခု လွဲနေပုံရပါတယ်။ ကျမ အချိန်ရရင် ပြန်ရှာပြီး ဖြည့်စွက်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ကိုးကား စာအုပ်ပါအတိုင်း ရိုက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ... ။
9/03/2007 12:42 PM
ကျေးဇူးပါဗျို့။ ကျောင်းမှာသင်တုန်းက သိပ်အလေးမထားမိဘူး။ ခုမှပဲ သေချာပြန်ဖတ်ရတော့တယ်။
9/04/2007 7:15 AM
10/09/2016 1:36 PM